Ga Jizọs 2036? | Apg29
Ga Jizọs 2036?
Ma ọ bụrụ na Jizọs bụ n'ezie na-abịa azụ na 2036 mere na ọ nwere Bible owuwe ime 2029th
Anders Gärdeborn na akwụkwọ ya "Mästerdirigentens ọrụ".
The Bible owuwe-ewe ebe afọ asaa tupu Jizọs alaghachi. Jizọs nwere ike ọ bụghị laghachi azụ ruo mgbe owuwe ka mere. Na 2029, anyị maara mgbe ahụ banyere Anders Gärdeborn nri.
Ndị mmadụ na okwukwe
Anders Gärdeborn , nke, na mberede, bụ nnọọ nkà na ihere, na onye dere akwụkwọ bụ " Mästerdirigentens na-arụ ọrụ " ọnọde a ngụkọta oge na Jizọs ga-abịa azụ afọ 2036th
Ọ bụrụ na anyị nwere ike, ihe ndị ọzọ, na-ege ntị Radio P1 " Ndị mmadụ na-na okwukwe ". Ọ nwetara a full 16 nkeji dị na usoro ihe omume na-ewetara ya tesis.
Olee ngụkọta oge arahụ
Iji nweta na narị afọ, o si Bible chọpụta na Jizọs na-abịa azụ 5999 afọ mgbe e kere eke. Iji na ọnụ ọgụgụ ike kpọpụ, m na ọ dịghị emegideghị ma mgbe ahụ, ọ ga-agafeta nọmba Gregorian kalenda bugota na 2036, na ebe a na m pụtara na ọ nwere ike na-ezighị ezi.
The Gregorian kalenda na anyị na-eji na-adịghị ezi ezi mgbe nile. Ọ maara na ọ miscalculated na a ọtụtụ afọ mgbe a mụrụ Jizọs. Ma ọ ga-iju m na Jesus n'ezie na-abịa azụ gburugburu 2036th
Ma ọ bụrụ na Jizọs bụ n'ezie na-abịa azụ na 2036 mere na ọ nwere Bible owuwe-ebe 2029. The Bible owuwe-ewe ebe afọ asaa tupu Jizọs alaghachi. Jizọs nwere ike ọ bụghị laghachi azụ ruo mgbe owuwe ka mere. Na 2029, anyị maara mgbe ahụ banyere Anders Gärdeborn nri.
Ma m ga-tụọ otu ihe: Anders Gärdeborn adịghị zute ya mgbawa na-egosi na ọ pụrụ ịbụ eziokwu na niile. Gärdeborn enweghị kpochapụwo anya nke owuwe na anyị na-ahụ na Bible. Ọ bụrụ na ị na-akpachara anya gbakọọ kwuru na Baịbụl na oge, mgbe ahụ ị ga-ijide n'aka na-eme ka ihe niile ihe ọzọ ndị a na Bible na-akụzi, na anaghị hapụ idenye ihe ọ bụla.
Ọ ga-ekwe ka ọ Anders Gärdeborn kwere na oké mkpagbu ahụ amalite na 2029, afọ asaa tupu Jizọs alaghachi. Lee, ọ na-isiokwu na oké mkpagbu ga-adịru afọ asaa tupu Jizọs nwere ike ịbịa azụ.
Zọpụtara na njikere
Ma oké mkpagbu ahụ ga-enwe ike ịpụta, a ga-enwerịrị ihe abụọ. Mbụ i nwere owuwe nke zọpụta ndị kwere ekwe na-ebe na mgbe ahụ nwere àmà na-egosi na-abịa n'ihu. Na-emegide Kraịst nwere ike na-apụta mgbe owuwe nke Jesus kwere ekwe itie.
Dị ka ogologo oge dị ka owuwe bụghị ẹka ebe, àmà na-egosi adịghị abịa n'ihu. Àmà na-egosi ike na-abịa n'ihu taa n'ihi na owuwe emezubeghị. Ma-abịa ọ bụ ike iputa na 2029? Ma ọ bụ ga-owuwe-eme tupu?
Ọ kasị mma na anyị na-ama natara Jizọs mere na anyị na-azọpụta na njikere.